Ndụ anyị na-amalite ịkwụsị ụbọchị anyị na-agba nkịtị banyere ihe ndị dị oké njọ: ònye nwere ike ikwu ihe ọzọ? ... "Ọ dịghị onye" ... Ya mere, anyị ga-eti mkpu na ịkatọ ikpe na-ezighị ezi niile n'Ebe Ọdịda Anyanwụ.
Site na: KongoLisolona: November 18, 2017 00: 40 Enweghị asịsa
Mmeri ebighị ebi nke ikpe na-ezighị ezi bụ ule dị egwu. Mkpụrụ obi na-eme ngagharị megide imegide oke egwu a. Ma udo adighi olile anya maka ya, ma o buru na o nabataghi ihe ojoo a.
Site, Martin Luther King Jr
Ihe omuma nke Zoological: Kedu ihe ị na-akpọ cougar n'asụsụ ala gị?
Ọkt31 03: 13